China Clean Air Room manazava Unit Manufacturers sy Suppliers | Bueco
Io rafitra fikirakirana rivotra madio dia ampahany amin'ny alalan'ny terminal ny rafitra famerana mari-pana, io no tena ahitana ny famatsian rivotra mpankafy fizarana, hihena coil (fanafanana coil) fizarana, kilasy hafa ny sivana sy ny hafa Functional fizarana fizarana. Zava-tena ho an'ny fanadiovana, na efitrano madio fampiharana. Raha misy hafa takiana hafa noho ny faneva vokatra, azafady mampahafantatra, dia hanana ny fangatahan'ny customization.
1 Ny toe & PanelsNy toe, extruded aluminium firaka na plastika-vy, manome hery sy ny fahamarinan-toerana avo, harafesiny mahatohitra mifono, tsara insulation soatoavina. Hakitroky avo dia fanerena hentitra CFC nampidirany anelanelan'ny taratasy roa mba hanome hery avo roa heny hoditra Voaro tontonana. Standard tontonana hateviny dia 50 ~ 90mm amin'ny insulation hakitroky ny 45kg / m3, ny atitany taratasy miloko azo Stainless vy na vy araka ny mpanjifa ny fepetra.
2 Fan & maoteraNy kodiarana dia fitohy, ary dynamically mandanjalanja ny ISO1940 sy AMCA 204-G2.5 Fenitra. Mpankafy taorian'ny fivoriambe rehetra dia Karakarao tsara-voalanjalanja ny ISO1940 sy AMCA 204-G2.5 Fenitra. Bearings rehetra ireo na karazana baolina Groove lalina amin'ny adaptatera hasehonao na boribory-roller bearings karazana voaisy tombo-kase amin'ny andaniny sy ny ankilany. Motors dia fonosina mpankafy tony tanteraka karazana miaraka amin'ny mpianatra F insulation ho IP55 fiarovana, Standard maotera no Siemens, ABB na marika hafa voatendry no tsy voatery.
3 hihena & fanafanana coil
Standard coils dia naorina avy amin'ny fantsona varahina tery nampikambana ny aluminium vombony, ary varahina threaded lohapejy, hita ao avokoa ny tafo vy filanjana azy. Coil safidy dia: 1. Anti-harafesiny mifono coil, 2. Steam Distributor fanafanana coils, 3. Evaporator coils, 4. Copper vombony, 5. Tinned varahina vombony fanitsiana.
4.2 Electrode humidifier dia ahitana ny electrodes, etona varingarina, Stainless vy fizarana sodina sy ny fanaraha-maso elektronika ny fitsipika sy ny mandeha ho azy ny rano Flushing
4.3 Evaporative humidifier 4.4 Air milina fanasan-damba 4. 5 hafa humidifier 5 Dehumidification sy reheating fitaovana izany dia manana ny asa dehumidification sy reheating amin'ny vondrona iray, ando ambany fanaraha-maso fotoana dia tanteraka amin'ny fanohanana ny hipoaka ny rano sy ny manan-tsaina coil fanaraha-maso ny rafitra.
6 Heat fanarenana Ireto karazana fitaovana sitrana hafanana azo nanome: 6. 1 Plate hafanana 6. 2 mafana kodia fanarenana 6. 3 Heat sodina sitrana
6. 4 Coil hafanana sitrana
Ireto manaraka ireto karazana sivana azo nanome;
7.2 Final sivana
High fahombiazana voalamina tsara sela sivana, kilasy H10 ho H13, raikitra amin'ny fononteny mahitsizoro, voanjo sy horonan na clamps amin'ny tafo vy mavesatra gasketed rafitra.
7.3 Filter safidy
Carbon & fitaratra-fibre mitambatra kitapo sivana Camcard, simika sivana cylinders Ambient sivana.
8 taratra manimba jiro taratra manimba jiro ihany no mahomby eo amin'ny bakteria tamin'ny ambonin'ny zavatra, dia azo ampiasaina mba hanafoana ny bakteria eny ambonin'ny sivana, coil sy tatatra lasitra. C onja tarika 265nm taratra manimba quartz jiro amin'ny fantsona ny jiro fitaratra ela androm-piainany. Misy fiarovana jiro eo amin'ny fahafahana miditra varavaran'ny taratra manimba jiro, ny jiro ho mifamadika eny, raha ny varavarana misokatra ho an'ny fiarovana.
Damper dia hanana hery avo extruded aluminium lelan-tsabatra, ABS fiara-fitaovana, ka dia niainga anatiny / ety ivelany. Ary ny lelany dia manify amin'ny "O" -type gasket famehezana.
10 Control rafitra ny rafitra fanaraha-maso dia manome toy ny isan-maso tsara ny fandidiana fepetra takiana amin'ny namana fandidiana interface tsara, malaza singa fanaraha-maso. 10.1 Tsara tsindry Control A. rivotra madio rafitra foibe, miaraka amin'ny rivotra mikoriana fitaovana famerana ny tahan'ny B. Hozaraina rafitra rivotra madio, amin'ny inverter fandrefesana, ny rivotra dia tsy tapaka ny tsindry sy ny rivotra mikoriana tahan'ny tafatoetra.
C. Exhaust rivotra fanaraha-maso, interlock amin'ny varavaran'ny efitrano fandidiana.
10.2 Energy asa fahavaratra
A. mandany faharoa miverina rafitra rivotra, mamonjy hery.
B. mandany VFD maotera ny hifehy ny rivotra tahan'ny mikoriana, mamonjy hery.
C. Ataovy ny hetsika miaraka amin'ny VFD toe rafitra
Control rafitra customization est disponible.
AHU mitambatra modely
ny mpankafy postposition, fa ny fikarakarana rehetra fitaovana ao amin'ny fizarana tsindry ratsy. Ny tarika Ny halavan'ny Dia vetivety foana, ary mety ho fametrahana. Io no rafitra azo ampiharina ho an'ny rafitra amin'ny ankapobeny izay tsy fahadiovana fangatahana na ny madio rafitra fa ny vondrona voafetra ny lavany.
Araka ny tarehimarika hita, dia ny fototra modely ny fitambaran'ny A rafitra, dia ahitana fizarana asa fototra: mampifangaro boaty, mialoha ny sivana, tena sivana, hihena coil, heater, humidifier, mpankafy sy ny maotera, sns Izao fototra, Ireo mpampiasa dia afaka mihena koa ny hitombo na asa hafa fizarana araka izay nilainy avy.
Ny mpankafy mpampiankin-teny, fa ny tena lehibe sivana sy ny faritra hafa ao amin'ny fizarana tsindry tsara, izany no mahasoa ny fialofana, ary ny coil tatatra eny ny Voafintina rano. Io tetika ankapobeny no azo ampiharina ho an'ny madio rafitra famerana mari-pana.
Araka ny tarehimarika hita, dia ny fototra modely ny fitambaran'ny rafitra B, dia ahitana fizarana asa fototra: mampifangaro boaty, mpankafy sy ny maotera, Diffuser, mialoha ny sivana, tena sivana, hihena coil, heater, humidifier, sns Izao fototra, mpampiasa dia afaka mampitombo na mihena ihany koa ny asa hafa fizarana araka izay nilainy avy.
ny mpankafy napetraka amin'ny toerana afovoany, fa ny tena sivana any amin'ny tsara ny tsindry sy ny fizarana ny faritra hafa ao amin'ny fizarana tsindry ratsy. Io no rafitra azo ampiharina be dia be ho an'ny madio rafitra famerana mari-pana.
Araka ny tarehimarika hita, dia ny fototra modely ny C fitambaran'ny rafitra, dia ahitana fizarana asa fototra: mampifangaro boaty, mialoha ny sivana, hihena coil, heater, humidifier, mpankafy sy ny maotera, Diffuser, tena sivana sy ny fivoahan'ny fizarana, sns On fototry izany, ireo mpampiasa koa dia afaka mampitombo na mihena fizarana asa hafa araka izay nilainy avy.
manana ny famatsiana mpankafy ka hiverina mpankafy, ny rafitra dia afaka mahatsapa miova rivotra madio mikoriana hazakazaka. Io no rafitra azo ampiharina ho an'ny rafitra amin'ny ankapobeny izay tsy manana fampiononana fahadiovana fangatahana na rafitra famerana mari-pana.
Araka ny tarehimarika hita, dia ny fototra modely ny D fitambaran'ny rafitra, dia ahitana fizarana asa fototra: miverina mpankafy, mitambatra mampifangaro efajoro, mialoha ny sivana, tena sivana, hihena coil, heater, humidifier, famatsiana mpankafy sns Izao no fototry, mpampiasa dia afaka mampitombo na mihena ihany koa ny asa hafa fizarana araka izay nilainy avy.
Loha Hevitra 1
M 3/ h M 3/ s
1. Ny rivotra hiverina ho an'ny angon-drakitra fepetra voalaza etsy ambony.
2. Return rivotra fepetra manondro: ny niditra rivotra dB 27 ℃, WB 19.5 ℃ for hihena, dia tonga ny DB21 ℃ ho fanafanana.
3. rivotra madio toe (100% rivotra madio) dia milaza: ny niditra rivotra dB 35 ℃, WB 28 ℃ for hihena, dia tonga ny dB-5 ℃ ho fanafanana.
4. Heating fitsipika toe-piainana: niditra rivotra Temp .: 21 ℃ dB, rano mafana miditra temp.:60 ℃.
Previous: Modular Air mizara tsara Unit
Next: Common DX Air fikirakirana Unit
Clean Air Room marindrano fikirakirana Unit
Modular Room Clean Air fikirakirana Unit
Clean Air Room mitsangana fikirakirana Unit
Rano Room Clean Air hihena fikirakirana Unit
Heat Recovery rivotra madio Room Clean Air fikirakirana Unit
Constant Temperature sy ny hamandoana DX Air Handli ...
Common DX Air fikirakirana Unit
Fresh Air Handling Unit, Common Series Dx Air Handing Unit, Pharmaceutical Industry Ahu, Tube Fin Dry Cooler, Fan Coil Units Ceiling Mounted, Industrial Closed Circuit hihena Tower,